Utyelelo kwigumbi lokubaleka iAudi eMadrid ukukhuthaza itekhnoloji yezithuthi zombane | Iindaba zeGajethi
Ukuba usibuza ngemoto yombane, kunokwenzeka ukuba uTesla uza kuqala engqondweni, nangona okomzuzwana kungafikelelwa liqela elinethamsanqa, nangona kusungulwa iModeli E, uElon Musk uya kuba nakho lifezekise iphupha lakhe lokusondeza iimoto zombane kufutshane kwinani elikhulu labasebenzisi.
Kodwa i-Tesla ayisiyiyo kuphela inkampani esebenza kwizithuthi zombane kuluntu ngokubanzi. IMercedes, iBMW, iAudi, nkqu nesihlalo, kudala besebenza kule teknoloji ukuba bakwazi Qalisa izithuthi ngokuzimela okufanelekileyo kwintengiso esivumela ukuba siyisebenzise yonke imihla ngaphandle kokuya kwizikhululo zegesi.
I-Audi inyusa itekhnoloji yezithuthi zombane eSpain, okokuqala e-Barcelona kwaye ngoku eMadrid kwaye ngenxa yoku ifuna ukuthatha ithuba lokutsala okuye kwafunyanwa ngamaGumbi okubaleka kule minyaka idlulileyo. Igumbi lokuPhunyuka ngeAudio, sele ebhaptiziwe njengegumbi le-e-tron, amava athabathe iyure apho ababekhoNgamaqela abantu aba-3 ukuya kwaba-5, baya kuba neyure yokufumanisa ukuba uphi ugqirha olahlekileyo ngaphandle komkhondo. Indawo yonke iya kusinika inkqubela phambili kwezobuchwephesha ezinje ngeengalo zerobhothi, iiholograms, uqikelelo olwenziweyo kunye nokufakelwa koomatshini apho kuya kufuneka sisebenze ukufumana ugqirha olahlekileyo.
Ngezi ntsuku, kude kube ngu-30 kuNovemba olandelayo, singandwendwela lo msebenzi wasimahla u-Audi asinika wona funda malunga netekhnoloji entsha ye-drive drive kwiimodeli ezilandelayo eziza kuzazisa kwintengiso. Lo mboniso ubekwe kwisitalato i-Palos de la Frontera esingu-20.
Njengoko kuchaziwe yiAudi
Phantse iyure, abathathi-nxaxheba baya kwikamva, apho kufuneka basebenzise ingcinga ukusombulula ii-enigmas ezahlukeneyo kwaye badlulele kuthotho lweemvavanyo, bonke benetekhnoloji yakutshanje; Kuphela ke baya kukwazi ukusombulula umceli mngeni ukuze bakwazi 'ukubaleka'. Sicinga ukuba yindlela emnandi yoluntu ukuba ifunde ngekamva leemoto zombane. Ikamva eliya kuba yinyani kulo nyaka uzayo kunye neAudi e-tron quattro, eya kuthi ibeneteknoloji yakutshanje yombane ye-100% eqinisekisa uluhlu olungaphezulu kweekhilomitha ezingama-500. Ngokusungulwa kwale modeli ngo-2018, siya kuba yenye yeempawu eziphambili kwizithuthi ezihamba ngombane.
Ukuba useMadrid ngale mihla kwaye uyafuna thatha ithuba kwitekhnoloji yeemoto zombane zexesha elizayo zenkampani yaseJamani, inokuba lithuba elihle lokuthatha ithuba lomnyhadala, endikukhumbuza wona, uphela nge-30 kaNovemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Igumbi lokubaleka leAudi liya eMadrid ukukhuthaza iteknoloji yezithuthi zombane